Cristiano Ronaldo Oo Fikirkiisa Ka Dhiibtay Aragtida Uu Ka Qabo Waayaha Ciyaareed Iyo Xifiltankii Uu Messi La Soo Galay. - Gool24.Net
Cristiano Ronaldo Oo Fikirkiisa Ka Dhiibtay Aragtida Uu Ka Qabo Waayaha Ciyaareed Iyo Xifiltankii Uu Messi La Soo Galay.
Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa tartan adag ku soo jiray in ka badan tobankii sanadood ee ugu danbeeyay laakiin labadan xidig ayaa isku haya ixtiraam wayn sida ay hadalkooda ku xusaan marararka wax laga waydiiyo in ay aragtooda iska bixiyaan.
Ronaldo ayaa muujiyay sida uu ula dhacsan yahay waayaha ciyaareed ee Lionel Messi wuxuuna isaga laftiisu tixraac ka dhigtay in Messi uu isaga tabay markii uu kaga soo baxay horyaalka La Liga.
Lionel Messi ayaa 6 jeer ku soo guulaystay abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee Ballon d’Or halka Cristiano Ronaldo uu 5 jeer abaal marintan soo hantay taas oo la micno ah in ay 11 jeer dhexdooda ku soo guulaysteen.
Xifiltanka Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa soo bilawday markii uu Ronaldo joogay Manchester United laakiin waxa uu cirka isku shareeray markii uu xidiga reer Portugal u wareegay Real Madrid ee ay kulanka Clasico-da si joogto ah iskugu wajahayeen muddo sagaal sanadood ah.
Ronaldo oo bixinaya aragtiisa waayaha ciyaareed ee Lionel Messi ayaa yidhi: “Anigu xaqiiqdii waan la dhacsanahay waayihiisa ciyaareed ee ilaa hadda uu soo qaatay. Isagu (Messi) waxa uu haddaba soo sheegay in uu dhibaato ku dareemay markii aan horyaalka Spain ka baxay, sababtoo ah waa xifiltan uu isagu u bogay”.
Miyuu xifiltanka Ronaldo iyo Messi yahay mid khaas ah oo aan noociisa oo kale hore loo arag? Ronaldo ayaa su’aashanka jawaabay wuxuuna soo qaatay magacyo waa wayn oo Sportska soo maray oo ay dad kale soo xifiltameen.
Ronaldo oo ka hadlaya xifiltankii soo dhex maray Messi ayaa yidhi: “Waa xifiltan fiican oo kubbada cagta ka dhex jira, laakiin ma aha reeban. Michael Jordan waxa uu xifiltan ku soo lahaa Basketbaool, Ayrton Senna iyo Alain Prost waxay xifiltamayaal waa wayn ku ahaayeen Formula One”.
Cristiano Ronaldo ayaa xifiltankiisa isaga iyo Messi iyo magacyada waa wayn ee uu soo sheegay hal xidhiidh ka dhexaysiiyay wuxuuna yidhi: “Waxa kaliya ee ay dhamaan xifiltanyadan waa wayn ee Sportsku ay iskaga mid yihiin waa in ay yihiin kuwo caafimaad qaba”.
Markii uu hoos u dhacay xifiltankii Messi iyo Ronaldo waxay labadan xidig bilaabeen in ay muujiyaan hadalo ay isku muujinayaan ixtiraam badan inkasta oo markii ay Spain wada joogeen uu xifiltankoodu meel sare ahaa.